October 19, 2019 – Voice of Myanmar
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ဘတ်သန်း ၅၀၀ တန်ဖိုးရှိမူးယစ်ဆေးတွေ ဖမ်းမိ
October 19, 2019 Editor Htein Lin
ဘန်ကောက်၊ အောက်တိုဘာ-၁၉ မျိုးဆက်(VOM) ထိုင်-မြန်မာနယ်စပ်အနီးတွင် မက်သာဖက်တမင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ်သယ်ဆောင်လာတဲ့ နောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ ၁၈ ဘီးကားကို တာ့ခ်-မဲဆောက် ကားလမ်းမှာရှိတဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာ အောက်တိုဘာ၁၈ ရက်က ရပ်တန့်စေပြီး ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးရှာဖွေရာမှာတော့ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာ ဘာမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက ဆက်လက်စစ်ဆေးရာမှာတော့ မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ကြမ်းခင်းမှာ လျို့ဝှက်အပေါက်တွေ ဖန်တီးပြီး နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအိတ်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေရဲ့ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးဟာ ဘတ်သန်းပေါင်း ၅၀၀ ရှိတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ဖို့ဖရာခရိုင်ကနေ နာ့ခွန်ပါသွန်က ဖောက်သည်တစ်ဦးဆီကိုပို့ဖို့အတွက် ငှားရမ်းခံရတဲ့ ကားသမားနှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သံသယရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနောက်တွဲယာဉ်ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပါရှိတာကို မသိဘူးလို့ ကားသမားနှစ်ဦးစလုံးက…
ကမ္ဘာ့သတင်း, မှုခင်း, သတင်း, မြန်မာသတင်းLeaveacomment
အာဖဂန်ရှိ ဗလီတစ်ခုတွင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၆၀ ကျော်သေဆုံး
ကဘူး၊ အောက်တိုဘာ-၁၉-၂၀၁၉ မျိုးဆက်(VOM) အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ရှိ ဗလီတစ်ခုမှာ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က ၀တ်ပြုဆုတောင်းနေကြချိန်မှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၆၀ ကျော်သေဆုံးသွားတယ်လို့ အာဖဂန်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၃၆ ဦးလည်းဒါဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ အသေခံဖောက်ခွဲရေးသမားတွေဟာ ဗုံးနှစ်လုံးကို ဗလီအတွင်းမှာ ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ နန်ဂါဟာပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို တာလီဘန်နဲ့ သူ့အပေါင်းအပါ အကြမ်းဖက်သမားတွေလုပ်တာလို့ အာဖဂန်သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရ်ှိသူက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စွပ်စွဲချက်ကို တာလီဘန်အဖွဲ့က ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ယခုနှစ်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အရပ်သား ၂၅၀၀ ကျော်သေဆုံးသွားပြီး ၅၇၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ အာဖဂန်စစ်မြေပြင်ကနေ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် တာလီဘန်အဖွဲ့နဲ့ အမေရိကန်တို့အကြား…
သဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်မှု ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
မန္တလေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၉-၂၀၁၉ ဟိန်းကို(VOM) သဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်မှု ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေး‌နွေးပွဲတစ်ခုကို ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ က အောင်မြင်ခြင်း ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မသန်စွမ်းသူများအရေး၊ လိင်ဝိသေသကွဲပြားသူများအရေး၊ ဒေသခံပြည်သူများ ရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့အသံတွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲက ရလဒ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်များ နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်တွန်းနိူးဆောင်မှုပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ #voiceofmyanmar#မန္တလေး#သဟဇတဖြစ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ# Unicode သဟဇာတဖွဈရေးနှငျ့ လူတိုငျးအကြုံးဝငျမှု ဆှေးနှေးပှဲပွုလုပျ မန်တလေး၊ အောကျတိုဘာ ၁၉-၂၀၁၉ ဟိနျးကို(VOM) သဟဇာတဖွဈရေးနှငျ့ လူတိုငျးအကြုံးဝငျမှု ခေါငျးစဉျနဲ့ ဆှေး‌နှေးပှဲတဈခုကို ဒီကနမေ့နကျပိုငျးက မန်တလေးမွို့ က အောငျမွငျခွငျး ဟိုတယျမှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဆှေးနှေးပှဲမှာ မသနျစှမျးသူမြားအရေး၊ လိငျဝိသသေကှဲပွားသူမြားအရေး၊ ဒသေခံပွညျသူမြား ရဲ့ လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောပွောကွားတဲ့အသံတှကေို ဆှေးနှေးသှားမှာဖွဈပွီး ဆှေးနှေးပှဲက ရလဒျတှကေို…
သတင်းကောင်းတပုဒ်နဲ့ သတင်းသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့
zawgyi VOM ( Voice Of Myanmar ) မှာ သတင်းထောက်လုပ်တော့မယ့် သတင်းထောက်တွေအတွက် ရုံးတွင်းသင်တန်းလေးနဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို အရင်ဆုံးမျှဝေဖလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းသမားတွေအတွက် အခြေခံသင်ခန်းစာဖြစ်သလို သတင်းဖတ်သူတွေလည်း ဘယ်ဟာကိုသတင်းလို့ခေါ်တယ် သတင်းတပုဒ်မှာ ဘယ်လို အရာတွေ ပါသင့်တယ် ၊ ဘယ်လိုလူကို သတင်းသမားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာ သိသင့်သိထိုက်တယ်ထင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သတင်းဆိုတာဘာလဲ? သတင်းဆိုတာ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် က လာတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှန်သမျှ သတင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ဆရာ့ဆရာတွေက ပြောခဲ့တာကို မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေက သတင်းဖြစ်မလဲ ? သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ပဋိပက္ခ၊ နည်းပညာ၊ တိုက်ပွဲ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ မိုးလေဝသ၊ အားကစား၊ ပညာရေး၊ လူအခွင့်အရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးတွေအပြင်…
အယ်ဒီတာ့အာဘော်Leaveacomment